बलत्कार र हत्या किन??? – कमल खबर
Home/लेख/रचना/बलत्कार र हत्या किन???
२०७५ फाल्गुन ९, बिहीबार १७:४८ गते
कमल , झापा
कुनै पनि कोणबाट लेखिने बिषय होइन बलत्कार, हत्या आतंक र जबर्जस्ती करणी तर दिनहुँमा आउने समचारले लेख्न बाध्य बनाएको छ । आखिर किन सिकार भइरहेका छन् महिला यसरी बलत्कार हत्या र प्रताङ्का समाजमा लुकेको छ हाम्रो सामाजिक चिन्तन: यसको कारण पुरुषबादि चिन्तन र महिला बढि चिन्तन । हाम्रो यो समाजमा बाचिरहेका छौ । गर्भमा रहँदा छोरी भएको कारणले फालिन्छन् र फाल्ने पनि तिनै छोरी वा महिला हुन् । बिरोध भाषाको यो समाजमा पुरुषलाई मात्रै भन्न मिल्दैन गर्भमै छोरी तुहाइने काम पहिलेका अशिक्षित आमा भन्दा अहिलेका शिक्षित आमाले बढि गरिहका छन् र देखिरहेका छौँ । त्यसैले पुरुसलाई केबल पुरुषसंग मात्र जोडेर हेरिनु हुँदैन । सबै पुरुष पुरुषबादि र सबै महिला नारीबादि हुँदैनन् । अर्को कारण बजार आधुनिकता बजारको अधिकतम विकास र बिश्वव्यापी सञ्जालिकृत व्यापार बिदेशी रहनसहनको कारण समाज पुँजीबादी बनिरहेको छ । पुँजीबादी ब्यवसायमा हरेक बिषयलाई बस्तुसँग र बस्तुलाई व्यापार संग तुलना र आकलन गरिन्छ । बिभिन्न मालबस्तु उत्पादन गर्नु र त्यसको प्रयोग गर्ने र त्यसको परिक्षण प्रर्याय बनीरहेको यर्थाथ कति महिलाले बुझिरहेका छैनन् भने कति त्यसमै रमाईरहेका छन् । दिनहुँ भईरहेने सुन्दरी प्रतियोगीताले यसको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ ः छोरी चेलीलाई सुन्दरी प्रतियोगीतामा भिडाउने र छोटा–छोटा लुगा लगाएर बाहिर समाज बजारमा हिड्ने गरेर आजकाल बलात्कार हत्या आतंक बढेको छ ।
कमजोर कानुनी व्यवस्था भएको बन्दोबस्त पनि कमजोर प्रबाभ अर्को कारण हो । नेपालको फौजीबादी कारणको अवस्था हेर्दा यौनजन्य दुराचार र अपराध सम्बन्धीहाल सम्मकै कानुनको ब्यवस्था प्रर्याप्त नभएको र अहिले पनि ब्याख्या र परिभाषा नै अपर्याप्त र अपुर्ण देखीन्छ । कानुनमा भनिरहेको जब्बरजस्ती करणी प्रयोगमा आहिरहेको बलात्कार भन्ने शब्दले एउटै अर्थ राख्दछन् वा राख्दैनन् ? हालै मात्र लागुभएको देबानी र फौजीबादि संहितामा समेत बिरोधबादि ब्याख्या छन् । बिवाह र बहुबिवाहको ब्यवस्था सम्बन्धी ब्याख्या पनि बाझिरहेको छ । तर पनि कानुन निरन्तर सुधारउन्मुख छ । बलत्कारीलाई फाँसीको माग गरिएको छ । मानिसको बाच्न पाउने अन्धकारलाई संरक्षण गर्ने अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकार सम्बन्धि महासन्धीमा नेपालको हस्तान्तरण गरेका कारण फाँसीको सजाय हनु नसक्ला तर अबरोध बालबालिकाको ज्यानै जाने गरि गरिरहेको बलत्कार हत्याका अपराधीले बाँच्न पाउँने हकको नाममा यो बिषयमा नसोच्नु नै उत्तम हो । बलत्कार र महिला हिंसाका बहुआयामित पक्ष छन् । घटनालाई पारिवारिक र सामाजिक आवरण भित्र दबाएर राख्ने आर्थिक प्रलोभन तथा मोलमोलाईमा मिलाउने र प्रतिष्ठानको बिषय बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
बहुआयमित सामाजिक रोगको एउटै मात्र उपचार सम्भब हुँदैन । त्यसका लागी रोगका कारण र प्रकार अनुसार नै न्यूनीकारणका प्रयास हुनपर्छ । समाज कुषोषित छ, हाम्रा बिचार ब्यवहार दुषित छ । हाम्रो समाजमा महिला हिंसाका विविध रोगको सिकार भै रहेको छ । जबर्जस्ती करणी बा बलत्कार र त्यसपछि हत्याका प्रकरण यी सबै घटना एक अर्कासँग अन्तरनिर्भर बनिरहेका देखिन्छ ।
समाजमा धेरै बेथिती बढेको छ । बलत्कार, हत्या आतंकले समाज आक्रान्त बढेको छ । जनताले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । सबै सामाजिक समस्याका बिरुद्ध समाजमा रहेको सचेत बर्ग निरन्तर लड्नु आवस्यक छ । उन्नत र चेतनशिल समाज निर्माण गर्नेको लागी कुनै एउटा संगठन बा समूह मात्रै प्रयाप्त हुदैन सम्पूर्ण जनसमूदाय सहकारी निकाय प्रहरी प्रसासन समाजमा रहेका सबैको आवस्यक पर्छ ।